Site na Razer Basilisk òké ga-atọ gị ụtọ Fps dị ka dwarf ekele ya na-akpalite | Akụkọ akụrụngwa
N'ime IFA, ihe ngosi teknụzụ kachasị mkpa a na-eme kwa afọ na Berlin, e gosipụtara ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ngwaahịa ahụ ga-eru ahịa na ọnwa ndị na-abịa. Na Actualidad Gadget anyị enyela akụkọ dị mma banyere akụkọ niile ewepụtara, opekata mpe nke kachasị mkpa.
Ngalaba akụrụngwa egwuregwu vidio enweela ọnụnọ na mmemme a, agbanyeghị na emere izu maka ngalaba a izu ole na ole gara aga. Dị Razer, Ọ ghọwo otu n'ime ngwa kachasị mma maka ndị na-egwu egwuregwu na uru nke aka ya. Ngwaọrụ kachasị ọhụrụ ọ gosipụtara bụ òké Razer Basilisk, òké na-etinye ihe na-akpali akpali, dị mma maka FPS.
Ihe mmalite a, nke dị n'otu akụkụ ya, n'aka ekpe ka ọ bụrụ nke a kapịrị ọnụ, na-enye anyị ohere gbaa aka na mkpịsị aka aka ekpe, ka anyị wee nwee ike ịchụ ma gbaa obere ọsọ ọsọ karịa taa site na oke na keyboard. "Nkịtị". Mana ọ bụrụ na anyị achọghị ịgbanwe ụzọ anyị si egwu, Anyị nwere ike ịhazi ihe na-akpalite ka anyị wee ghara iji ya iji chịkọta ihe ma ọ bụ mekọrịta.
Razer Basilisk na-enye anyị bọtịnụ nwere ike ịhazi 8 na nghọta ziri ezi nke 16.000 DPI. Ndị ọkụ dị na ngwa maka ndị egwuregwu abụrụla ebe nkịtị na ihe nlere a, ha agaghị efu. Site na ngwa ahụ, anyị nwere ike gbanwee ụdị agba anyị chọrọ igosipụta ka anyị na-eji oke. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị inweta ụdị ọhụụ Razer a, ị nwere ike ugbu a debanye aha na weebụsaịtị ịmara n'oge niile ụbọchị Septemba ga-ebupụta n'ahịa. Pricegwọ nke ihe mkpalite a ga-abụ $ 69,99 enweghị ụtụ isi, yabụ Europe ga-abụ ihe dịka euro iri asatọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ngwa » Iji Razer Basilisk òké, ị ga-enwe obi ụtọ na Fps dị ka dwarf ekele maka ịkpalite ya
Nkà na ụzụ a nwere ike igbu mkpụrụ ndụ cancer na 60 sekọnd